Inguva Yegore Rako-Ekupedzisira Kushambadzira Ongororo | Martech Zone
Inguva Yegore Rako-Ekupedzisira Kushambadzira Ongororo
Chitatu, December 9, 2009 Mugovera, October 18, 2014 Douglas Karr
Ndiyo nguva yegore zvakare… kana iwe fanira isa nguva padivi yekutarisa yako yegore yekushambadzira chirongwa. Gore rinotevera rinogona kuve rakakosha kupfuura chero gore rapfuura nekutora nekukurumidza kwemaitiro enhau enhau. Hezvino izvo zvandinokurudzira kuunganidza:
Kushambadzira Kushandisa neMiddle - iyi imari chaiyo inobhadharwa kushambadzira kwekunze uye kushambadzira. Kuputsa izvi pasi mukati mezvikamu kwakakosha zvakare. Mune mamwe mazwi, usangonyora 'online'… rovera online pasi kune webhusaiti, yekutsvaga injini yekushambadzira, vezvenhau, etc.
Marketing Resources Yakashandiswa neMidhi - izvi ndezvemukati mekushandisa mari musimba revanhu pamwe nemidziyo nemidziyo. Zvekare, ita shuwa yekutyora yega yega yepakati kusvika kune yakaderera yakajairika dhinomineta.
Kwevatengi Kuwana kana Chigadzirwa Kutengesa neMidhi - izvi zvese zviverengero uye mari yemari yakaunganidzwa nepakati… zvinosanganisira zvese zvinongedzo uye neshoko remuromo. Kunzwisisa kuti vangani vatengi, pamwe nekukosha kweavo vatengi, zvakakosha pakuronga kwegore rinouya. Dzimwe svikiro dzinogona kuunza madiki kuverenga… asi zvihombe zvikuru.
Kuchengetwa Kwevatengi neMidhi - izvi zvinogona kutora kumwe kuedza, asi nzwisisa zviri kuitwa nekambani yako izvo zviri kukanganisa kuchengetedzwa kwevatengi vako. Nguva zhinji zvirongwa zvedzidzo uye kubvunza kunoonekwa semubhadharo. Ziva kukosha kwemasevhisi aunopa pasina muripo… iwe waigona kuona zvakabudirira kwazvo pano!
Gore pamusoro peGore Kufananidza - marongero ako ekushambadza akaita sei kana zvichienzaniswa negore rapfuura? Unogona kubheja kuti zvichachinja zvakare rinotevera gore! Kuchinja yako midhiya musanganiswa, zviwanikwa uye marongero kuchawedzera kushambadzira kwako kudzoka pane investment
Usaregere gore-rekupedzisira kushambadzira ongororo. Mazhinji makambani anoshandisa mari kushambadzira kwaanenge aine zviwanikwa, kwavari funga mari yacho iri kubva, kana kwavanonyanya kugadzikana. Kuita ongororo yekupera kwegore kuchakupa maturusi aunoda kurwisa gore rinouya nezano nyowani, rekukunda!
Tags: Analyticsgore negoremishumo yegorekupera kwegoremibvunzo yekutengesakuongorora kwekushambadziragoredzvagore pamusoro pegoreongororo yekupera kwegore
Matanhatu Matanho eSocial Media Optimization
Chii Chaunowanikwa Kune Mune Injini dzekutsvaga?